Beyond the Memories ( 2013 ) - Myanmar Asian TV
Beyond the Memories ( 2013 )
အဲ့ထဲကမှ ”ကန်န” ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ ”ဟာရုတ” လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးကတော့ငယ်ငယ်တည်းကတစ်မြို့တည်းကြီးပြင်းလာကြတဲ့သူတွေပေါ့
ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် အတူတူဖြစ်သလို အရမ်းလည်းသံယောဇဉ်ရှိကြတယ်
အချိန်ကြာလာတာနဲ့သူတို့၂ယောက်သံယောဇဉ်ကသူငယ်ချင်းထက် ပိုနေပြီဆိုတာကိုလည်း၂ယောက်လုံးကစိတ်ထဲကနေ သိနေကြတယ်
”ကန်န” ဘက်က “ဟာရုတ” ဖွင့်ပြောလာဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ “ဟာရုတ” ကတော့မပြောလာခဲ့ပါဘူး
တနေ့တော့ သူတို့၎ယောက်ထဲက “ရာမာ” ဆိုတဲ့ကောင်လေးက “ကန်န” ကိုဖွင့်ပြောလာခဲ့တယ်
အဲ့ဒီ့နေ့မှာပဲ “ဟာရုတ” ဟာ ကန်နဆီအသွား ကားအက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်
အဲ့ချိန်တည်းကပဲ “ဟာရုတ”ဟာ သူ့ကြောင့်သေတာဆိုပြီး “ကန်န”စိတ်ထဲကစိတ်ဒဏ်ရာကသူမကိုခြောက်လန့်နေခဲ့ပါတယ်
၈နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာ “ကန်န” နဲ့ ကန်နလိုပဲ စိတ်ဒဏ်ရာရနေတဲ့ကောင်လေး “ရိုကူ ” နဲ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ခံစားချက်တူတဲ့ တူတဲ့သူတို့၂ယောက်ရဲ့ အတိတ်ကဒဏ်ရာတွေကို ဘယ်လိုပြန်ကုစားကြမလဲ??
ရိုကူကြောင့် သေသွားတဲ့ကောင်မလေးကရော ရိုကူ့ဆီဘယ်လိုပုံလေးနဲ့ ပြန်လာမလဲ??
အချင်းချင်း ကူညီဖေးမနားလည်ပေးရင် “ရိုကူ” နဲ့ “ကန်န” တို့တဖန်ပြန်ချစ်လာနိုင်ပါ့မလား??
“ဟာရုတ”သေတဲ့နေ့က “ကန်န “အရမ်းမျှော်လင့်ခဲ့ရသလို သူမကိုဖွင့်ပြောဖို့လာခဲ့တာဆိုတာကိုများ ၈ရှစ်အကြာမှာမှ “ကန်န” သိလိုက်ရတဲ့အခါ တွေဝေသွားမလား??
ဒါမှမဟုတ် “ရိုကူ” ကို သတ္တိရှိရှိ ချစ်နိုင်ပါ့မလား??
“လူတွေဟာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူကို ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ထပ်ပြီးရောချစ်လာနိုင်အုံးပါ့မလား”ဆိုတာတော့
Translated by Hsuho
Encoded by Sandar Lwin
File size:621 MB
MMATV Channel မှတင်ဆက်သည်
Actors: Aoi Nakamura, Chizuru Ikewaki, Kaoru Hirata, Kengo Kora, Masaki Okada, Masami Nagasawa, Yuki Furukawa
Openload.co MyanmarBluray 720p Download Soliddrive.co MyanmarBluray 720p Download
Peach Girl ( 2017 )
J-Movie များကို တောင်းတနေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် 2017 အစောပိုင်းမှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Peach Girl ဆိုတဲ့ Live Action လေး တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … Anime series ကို အခြေခံထားတာဖြစ်ပြီး Comedy , Romance ဇာတ်လမ်းလေး ဖြစ်တာကြောင့် J-Movie ချစ်သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမှာ အသေအချာပါပဲ ……
My Brother Loves Me Too Much ( 2017 )
Japan Movie လေးတွေ မတင်ဆက်ရတာ ကြာပြီဆိုတော့ … ကျောင်းသားအချစ်Fancy ဂျပန်ဇာတ်ကားလေးတကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော် … ဆဲတိုခလို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေး နဲ့ ဟရုခလို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေး နှစ်ယောက်က ဇာတ်လမ်းအစမှာတင်မောင်နှမပေါ့ … ဆဲတိုခ ကရည်းစားအရမ်းလိုချင်နေတဲ့ အရွယ် … သူ့အကိုဖြစ်သူဟရုခကလဲ သူ့ညီမကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပေးချင် အူတိုပုံလေးကချစ်စရာလေးတွေ … ဆဲတိုခက ငယ်ငယ်တုန်းကကောင်လေးတွေကို သူကြိုက်နေကြောင်းတွေလိုက်ပြောနေကျ ပြောတိုင်းလဲအငြင်းခံရတယ် … သူအရွယ်ရောက်လာတော့သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်လေးတွေက…
This Is Not What I Expected ( 2017 )
တရုတ်ဟာသဇာတ်လမ်းများကို သဘောကျ နှစ်ခြိုက်သူများအတွက် ဒီနေ့မှာတော့ That Is Not What I Expected ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … 2017 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Lan Baise ရေးသားထားတဲ့ Finally I Get You ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး ဒါရိုက်တာ Derek Hui…
Ash Is Purest White ( 2018 )
2018 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Chinese Drama ဇာတ်အေးလေးတစ်ကားပါ … 2018 Cannes Film Festival မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး Nomination တွေ ဝင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ် …. ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ … တရုတ်ပြည်ရဲ့ ဒုစရိုက်လောကကို အခြေတည်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး ကချေသည်ကောင်မလေး နဲ့ လူမိုက်ဂိုဏ်းဝင်…
Until Forever ( 2016 )
သင့်မှာ ထဲထဲဝင်ဝင် နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်ရတဲ့ အရာတစ်ခုရှိလား ? ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။ ဥပမာ – ဘုရားသခင်၊ တရားဓမ္မ၊ ကောင်းမွန်သော လူကြီးသူမတို့ရဲ့ ဆုံးမမှု စသဖြင့်ဆိုပါတော့။ ယုံကြည်တယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပေမယ့် ယုံကြည်တဲ့အရာပေါ်မူတည်ပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေက ပြောင်းလဲသွားတာပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားထဲက မိုက်ကယ်ဟာဆိုရင် ယုံကြည်မှုရဲ့ စွမ်းအားကို ပြသသွားခဲ့တာပါ။ မိုက်ကယ်နဲ့ မီရှယ်လ်တို့ရဲ့ အချစ်ရေးဟာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာအပြည့်…
Chalet Girl ( 2011 )
ဒီ Movie လေးဟာဆိုရင် 2011 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး adult humor တွေဖြစ်တဲ့ လူကြီးတွေပဲ နားလည် သဘောပေါက်တဲ့ ဟာသတွေနဲ့ sarcasm လို့ ခေါ်တဲ့ ထေ့ငေ့ါပြောတာတွေ irony လို့ခေါ်တဲ့ ရွဲ့တဲ့ပြောတာတွေကို မြိုင်မြိုင် သုံးထားတဲ့ Rom-Com movie လေးပဲဖြစ်ပါတယ် … Chalet girl ဆိုတာကတော့…
ဟာဝိုင်အီကျွန်းမှာရှိတဲ့ ကော်ဖီပင်တွေစိုက်ပျိုးရာ တောင်ပေါ်ဒေသ… ပုလိပ်ရောဂါကျရောက်ပြီးလူအမြောက်အများသေဆုံးတဲ့အခါ… ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့လူမသိသူမသိကပြားကောင်လေးဂျို… ဂျပန်နဲ့အနောက်တိုင်းသွေးနှောတဲ့ကလေးဟာ ကံဆိုးမှုတွေယူဆောင်လာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ရှေးရိုးစွဲအမြင်တွေကို ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ ရွာကိုအသစ်ရောက်လာတဲ့ဒေါက်တာလောရန့်စ်ရဲ့ကျွးမွေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ဂျိုတစ်ယောက်… ဆေးဝါးတွေကိုလိုအပ်သူတွေဆီပြေးပြီးလိုက်ပို့တဲ့အလုပ်လုပ်ရင်း.. ကော်ဖီစိုက်ခင်းပိုင်ရှင်ရဲ့သမီး ဂရေ့စ်ကိုချစ်မိတဲ့အခါ… လူကုံတန်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အယူအဆတွေနဲ့… မိသားစုနာမည်တောင်မရှိတဲ့ ဂျို… ငွေရှင်ကြေးရှင်ခေတ်သစ်ဆေးပညာတတ်ကျွမ်းတဲ့ ဒေါက်တာရေးစ်တို့ကြားထဲမှာ လူငယ်တွေရဲ့အချစ်ရေးဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာ… Romanceကားလေးဖြစ်ပြီး IMDbမှာလည်း 5.6/10ထိရရှိထားပါတယ် Translator : Myint Mo Zaw…
Love, Simon ( 2016 )
2018 ရဲ့ March လထဲမှာ 20th Century Fox ကနေ လူငယ်တွေကြားထဲမှာ ရေပန်းစားဦးမယ့် ကျောင်းသားအချစ်ကားလေးတစ်ကား ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် … တခြားနာမည်ကြီး လူငယ်အချစ်ကားလေးတွေနဲ့ မတူတဲ့ ဒီကားလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ မင်းသားလေးက Gay ဖြစ်နေတာပါပဲ … ‘Love, Simon’ ဟာ 2015 က ထွက်ခဲ့တဲ့ Becky Albertalli ရဲ့…
Honey ( 2018 )
ကျောင်းနောက်ခံ Japanese Romance film ချစ်သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် 2018 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် … Main Cast အနေနဲ့ Hirano Sho နဲ့ Taira Yuna တို့က အဓိက သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ် … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရရင် … အရာရာကိုကြောက်လန့်တတ်ပြီး ဘာမဆို မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်နေတဲ့…
ဒီကားလေးကကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါ မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေလည်းကြည့်ရှုခံစားနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Kosaku Ito က အထက်​တန်း​ကျောင်းမှာ ကမ္ဘာ.သမိုင်းသင်​တဲ့​ကျောင်းဆရာတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​ပြီး အပြင်​ပန်းအရကြည့်​ရင်​ ​ပေါင်းသင်းဆက်​ဆံ​ရေးအဆင်​မ​ပြေ​ပေမယ့်​ တကယ်​​တော့ ကြင်​နာတက်​တဲ့နှလုံးသားရှိသူပါ Hibiki Shimada က​တော့ ဆရာ Kosaku ကိုတဖက်​သက်​ကြိုက်​​နေတဲ့ ​ကျောင်းသူ​လေးဖြစ်​ပြီး အဲ့ဒိမတိုင်​ခင်​ တခါမှရည်းစားမထားဖူးသူလည်းဖြစ်​ပါတယ်​ ငယ်​ရွယ်​ပြီး အချစ်​မှာအ​တွေ့အကြုံမရှိ​သေးတဲ့ Hibiki ကဆရာ့ကို ရိုးရိုးသားသား ခံစားချက်​​တွေကို ဖွင့်​​ပြောလိုက်​တဲ့အခါ ဆရာ Kosaku ကလည်း…
Korea Ghost Story-2 : Love OF Vampire ( 2008 )
Fridayတိုင်းတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Ghost storyလေးတွေထဲကမှ Love of Vampireဆိုတဲ့ movieလေးပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့******** သေဆုံးချိန်မှာ သေမင်းတမန်နောက်မလိုက်ဘဲ ဝိညာဉ်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ပြန်ဝင်ခဲ့ပြီးနောက် သွေးစုပ်ကောင် ဖြစ်လာတဲ့ ကောင်လေးဟာ လူသားတစ်ယောက်ပြန်ဖြစ်ဖို့ အပျိုစင်ရဲ့သွေးကို လပြည့်ညတိုင်း သောက်သုံးရမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုးယောက်ပြည့်ရင် လူသားပြန်ဖြစ်မှာပါ လပြည့်ညတိုင်း အပျိုစင်တစ်ယောက်ရဲ့သွေးကို သောက်သုံးခဲ့ရာက လက်ထပ်ပြီး ပထမဆုံးညမှာတင်…
Genre: Drama, History, Horror, Romance, Thriller
Mr. Pride VS Miss. Prejudice ( 2017 )
ဒီကားလေးကတော့ 2017 April လောက်မှာ ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး Romance & Comedy movie လေးတစ်ခုပါ … ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကျူးဟုန် ဟာချမ်းသာတဲ့သူဌေးသားလေးဖြစ်ပြီး … သူ့ချစ်သူကောင်မလေး မိုမိုကို propose လုပ်ဖို့ပြင်ထားတဲ့ပွဲမှာ … လူမှားပြီး ထျောင်နန်နန် ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို မှားယွင်းပြီး propose လုပ်မိတဲ့အခါမှာတော့ … ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ …? ကျူးဟုန်…